Minisitry ny governemanta novonoina tamin'ny fianjerana fiaramanidina Paraguay
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Minisitry ny governemanta novonoina tamin'ny fianjerana fiaramanidina Paraguay
Ny fiaramanidina mitondra ny minisitry ny fambolena any Paragoay dia hitan'ny ekipa mpanao fikarohana sy mpamonjy voina rehefa tsy hita izy io tamin'ny Alarobia hariva.
Fiaramanidina iray nitondra ny minisitry ny fambolena any Paragoay, Luis Gneiting, no hitan'ny ekipa mpanao fikarohana sy mpamonjy voina rehefa tsy hita izy io tamin'ny Alarobia hariva, hoy ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny manampahefana misahana ny fiaramanidina ao amin'ny radio any an-toerana.
Nahita 6km miala ny seranam-piaramanidina Ayolas ny fiaramanidina, izay niainga. Teny an-dalana ho any amin'ny renivohi-pirenena, Asuncion, hoy i Luis Aguirre, lehiben'ny Direction National Aviation Civile.
Ilay fiaramanidina dia nitondra ny minisitry ny fambolena niaraka tamin'ny olona telo hafa. Nilaza i Aguirre fa mbola tsy nanana fampahalalana momba ireo mpandeha izy.
“Tao amin'ny tany mando no nahitana ny taolan'ny fiaramanidina. Hita ny tendron'ny rambony ary ny sisa amin'ny fiaramanidina dia anaty rano, "hoy i Aguirre. "Miorina amin'ny zavatra hitantsika, ary tsy ofisialy ity, dia tsy misy sisa velona."
Ny minisitra lefitry ny omby an'i Gneiting, Vicente Ramirez, dia tao anaty fiaramanidina ihany koa, hoy i Aguirre nanampy.
Nahita ilay fiaramanidina maotera kambana ny ekipa mpamonjy voina ny alakamisy maraina.
Nilaza i Aguirre fa vao roa na telo minitra no nanidina ilay fiaramanidina ary tsy nahatratra haavo avo alohan'ny nianjerany.
Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, ny mpandeha roa hafa dia ny teknisiana Luis Charotti sy ny mpanamory fiaramanidina, Gerardo López.
Voalaza fa niainga ny fiaramanidina ny alarobia tamin'ny 6 ora hariva hariva teo an-toerana.
Maty ny minisitry ny fambolena Paraguay, Luis Gneiting sy telo hafa, rehefa nianjera tamin'ny tany mando ilay fiaramanidina maotera kambana nitondra azy ireo nankany amin'ny renivohitra Asuncion ny alarobia alina, hoy ny tompon'andraikitra iray tamin'ny Alakamisy.
"Amin'ny alahelo lehibe no anambaranay ny fahafatesan'ny olona efatra tamin'ny sidina iray izay nisy lozam-pifamoivoizana," hoy i Joaquin Roa, lehiben'ny sekretera nasionaly vonjy taitra, ary nanampy fa ireo mpiasa vonjy taitra dia manandrana manangona ny razana sy ireo fiaramanidina "rava tanteraka".
"Misaona noho ity lozam-pifamoivoizana ity i Pagaguay rehetra", hoy ny filoha voafidy Mario Abdo, izay handray ny toerany amin'ny 15 Aogositra, tamin'ny mpanao gazety.
Ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo Cunard dia namoaka horonan-tsary niampita transatlantika manome aingam-panahy
Ethiopian Airlines sy DHL Global Forwarding dia manambara orinasa iaraha-miasa